1. kaabta Samsung Xiriir
2. kaabta Samsung Photos
3. kaabta Samsung SMS
4. PIN kaabta Samsung
Kaabta 5. Samsung Kies
6. kaabta Samsung in Cloud
7. Samsung ee kaabta Software
Qaybta 1. Waa maxay Samsung ee kaabta PIN? Qaybta 2. Waa maxay sababta aad qotomisay PIN ah ee kaabta? Qaybta 3. sida loo sameeyo PIN ah ee kaabta on Samsung Device? Qaybta 4. Sida loo beddel PIN on Device Samsung? Qaybta 5. Waa maxay si ay u samee Marka Device Samsung Android Ma la xiray iyada oo aan PIN kaabta?
Qaybta 1. Waa maxay PIN kaabta Samsung?
Waxaa jira dhawr fursadood oo qufulka shaashadda laga heli karaa qalabka mobile aad Samsung. Waxa ay hoos u qoran sida ay heerka ammaanka ay bixiyaan la weeraray iyagoo aamin ah ugu hooseeya iyo password isagoo ugu sarreeya.
Waji iyo Voice
Mar kasta oo aad qotomisay qufulka ammaanka isticmaalaya Unlock wajiga, wejiga iyo codka, ama doorasho hannaankii lagugu keentay in loo dajin lahaa PIN ah gurmad iyo sidoo. Xaaladdan oo qalab aad uu aqoonsan waayo wejigaaga iyo / ama cod ama aad illowdo hannaankii, PIN gurmad waxaa loo isticmaali doonaa si aad u hesho qufulka screen ee la soo dhaafay. Sidaa darteed, PIN gurmad Unlock ah ama nidaam, sida magacaba ka muuqata, waa PIN ah kaas oo aad ku dhici kartaa dib markii aad illowdo qufulka shaashadda ama qalab aad kaama aqoonsado.
Qaybta 2. Waa maxay sababta aad qotomisay PIN ah ee kaabta u Device Samsung?
Ka hor inta la aqoonsado muhiimadda ay leedahay PIN raad raac, aad u baahan tahay si ay u fahmaan waxa ay wajiga lagu furo, wejiga iyo codka, iyo fursadaha hannaankii yihiin ..
Unlock Waji aqoonsan yahay wajiga iyo sidani oo shaashadda. Iyadoo samaynta Unlock wajiga, waxa ay qaadataa sawirka wajigaaga. Waa in amaan darrida ka badan sirta ah ama hab xariir ah sababtoo ah qalabka lagu quful karaa qof kasta oo aad u eg. Sidoo kale, qalabka laga yaabaa in ay ku guuldareysato inay idin aqoonsadaan oo dhan sabab u sabab kasta Ta'wiil. Sidaa darteed, qalabka jirtey ayaa aad kor u taagaysa PIN raad raac haddii wejigaaga aan la aqoonsan yahay.
Waji iyo Voice:
Quud feature wajiga Unlock ah, Doorashadan qaadataa codkaaga tixgelin. Waxaad furo karaa shaashadda oo tusaya in aad wajiga iyo sidoo kale siinaya amarka cod aad qotomisay hore. Ma habboon tahay in qalab aad ku guul darreysato in ay aqoonsadaan wejigaaga ama cod ama labadaba, waxa aad u baahan doontaa inaad isticmaasho PIN gurmad ah in lagu furo shaashadda.
Waxaa la dhigay ilaa ay isku xira dhibcaha ee shaashadda in kasta oo hab eedeysanuhu. Ugu yaraan, afar dhibcood waa in la xidhiidhiyo in la abuuro qaab, taas oo loo isticmaali doono in lagu furo shaashadda. Waxa suurto gal ah in aad illowdo qaab ahaan ama orgi kasta oo yar ka dhigaysa isku dayo badan in lagu furo aad screen in aad ka maqan, sidaa darteed waa in aad hubisaa in aad gurmad ah waxay ka dhigan tahay in lagu furo aad shaashadda.
Maxaa Dhaca Haddii aadan awoodin in aad Unlock oo aadan haysan PIN ah ee kaabta?
Haddii aad illowday qufulka shaashadda ama qalab aad ku guuldareysato inay idin aqoonsadaan oo aadan haysan PIN ah gurmad, ikhtiyaarka kaliya ee aad kaga tegey, ka dib markii aqoonsiga Google, waa adag tahay resetting qalab aad. Waxa aad halis u ah oo laga badiyay xog muhiim ah oo ku saabsan xasuus gudaha telefoonka haddii aadan la abuuro gurmad ah waxaa loogu talagalay in aad PC. Xataa markaas, content oo dhan waxaa laga yaabaa in aan la xoojiyaa. Sidaa darteed, isagoo PIN gurmad ah ayaa noqotay lagama maarmaan.
Qaybta 3. sida loo sameeyo PIN ah ee kaabta on Device Samsung?
La keeneen in doonaa in aad qotomisay PIN ah gurmad ka dib markii qufulka shaashad u fidinno. Si aad u dhigay qufulka ah xijaab,
Tallaabada 1. Tag menu.
Tallaabada 2. Open Settings .
3. Riix Tallaabada screen xir ka dibna qufulka shaashadda. Waxaad arki doonaa shaashadda soo socda.
Tallaabada 4. Haddii aad doorato Waji Unlock, Face iyo Voice, ama Qaabka ka ah doorashooyinka sare, ka dibna waxa kale oo laga qaadi doonaa in aad shaashadda inay dib u dhigaan PIN ah gurmad.
Tallaabada 5. Riix Qaabka ama PIN , hadba kii aad dooneyso inaad sida PIN gurmad ah. Haddii aad dooratid PIN, waxay si aad u screen meesha aad ku qor karaan PIN ee gurmad, kaas oo noqon kara 4 ilaa 16 lambar qaadan doonaa. Riix Continue .
Tallaabada 6. Dib-u-soo geli PIN si loo xaqiijiyo iyo riix OK dhammayn nidaamka.
Qaybta 4. Sida loo beddel PIN kaabta on Device Samsung?
Waad beddeli kartaa PIN ka gurmad ku saabsan qalabka Samsung by tallaabooyinka soo socda si isku mid ah u shidida PIN ah markii ugu horeysay. In sidaa la yeelo,
Tallaabada 1. Tag> menu Settings > Lock screen > Screen qufulka .
Tallaabada 2. Waxaad la keeneen in dooni doona inay galaan macluumaadka Unlock ammaanka in aad hore u qotomiyey. Riix Next .
Tallaabada 3. Dooro qufulka ammaanka dejinta aad rabtid in aad leedahay oo la raaco amarrada onscreen dhammayn nidaamka ka.
Tallaabada 4. dooro file kasta oo gurmad gaar ah dhibic ka hoos menu si loo soo celiyo xogta aad. Haddii aadan awoodin in ay helaan faylka, riix file Find button. Dooro file ah in ay sii wadi.
Qaybta 5. Maxaa la Sameeyaa Marka Device Samsung Android Ma la xiray iyada oo aan PIN kaabta?
Haddii aad ilowday Unlock ammaanka iyo sidoo kale PIN gurmad ah, waxaad u baahan doontaa in ay adag tahay dib qalabka. Waxaa masixi doono dhammaan macluumaadka ee xasuusta gudaha qalabka haddii aad dib u aadan dhan files ama sawiro. Waxaa laga yaabaa inaad lumiso content unbacked.
Fiiro Gaar ah: Waxaa laga yaabaa in kala duwanaansho yar ee nidaamka adag keddibna ku xiran tahay samaynta iyo moodelka aad qalab Samsung; Si kastaba ha ahaatee, nidaamka guud waa isku mid.
Tallaabada 1. Switch off qalab aad adigoo riixaya batoonka ama ay ka saareen batteriga ka telefoonka.
Tallaabada 2. Isku day mid ka mid ah isku soo socda.
Ilaa Volume + Volume hoos + Power muhiimka ah
Volume hoos + Power muhiimka ah
Home muhiimka ah + muhiim ah Power
Ilaa Volume + Home + Power muhiimka ah
Press iyo sii daayo mid ah ama dhammaan furayaasha haddii aad dareento gariirka taleefoonka ama arkaan "nidaamka kabashada Android" shaashadda.
Tallaabada 3. Down Isticmaal Volume badhanka in ay dhex maraan menu. Raadi "Ha ogolaan in xogta / keddibna warshad." Riix furaha Power si ay u doortaan.
Tallaabada 4. Mar falgali fursadaha isticmaalaya Volume Down button. Raadi dooro "Delete dhammaan xogta user". Hannaanka dib A waxa lagu samayn doonaa.
Tallaabada 5. Dooro "reboot nidaamka hadda" marka hawshu dhamaato.
Top 5 lagu bedelan karo Samsung Kies
Ku rakib / uninstall / Update Samsung Kies on Mac
Ku rakib / uninstall / Update Samsung Kies on PC
Sida loo isticmaalo Samsung Kies in Maamul Files
Faylal ay kala soo wareegeen Samsung si iPhone
Faylal ay kala soo wareegeen iPhone in Samsung
iPhone VS Samsung Phones
Faylal ay ka dhaqaaq Nokia in Samsung
Xiriirada ka HTC in Samsung dhaqaaq
Nuqul Xogta laga iPad in Samsung
Waraaqda kaabta BlackBerry u Samsung Phone
Xiriirada kala iibsiga ka Android inay Samsung
Samsung Kies Review - waa wax xun Waxaa?
Sida loo Download, rakib, uninstall iyo Update Samsung Kies on PC
$ 380 Million ama $ 52 Million? Imisa Samsung ku leedahay Apple
> Resource > Samsung PIN kaabta> Samsung: wax aad Device Samsung xirantay